रोल्पाली गायक अशोक ओली र राधिका हमालको ‘सम्भव छैन हामी एक हुन’ सार्बजनिक (भिडियो) « Postpati – News For All
रोल्पाली गायक अशोक ओली र राधिका हमालको ‘सम्भव छैन हामी एक हुन’ सार्बजनिक (भिडियो)
गीत संगीतको क्षेत्रमा आफ्नो सफल स्थान बनाउँदै गरेका रोल्पाली गायक अशोक वली ‘परिवर्तन’को तेस्रो लोकदोहोरी गीत संग्रह ‘सम्भव छैन हामी एक हुन’ बजारमा ल्याउनुभएको छ । माया प्रेमसँग आधारित उक्त गीत सोमबार लिबाङमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो ।
गीत संग्रहको नव निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र कुमार पुनमगर ‘सिजल’ले लोकार्पण गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान, जिल्ला शाखा रोल्पाले आयोजना गरेको लोकार्पण कार्यक्रममा सांसद पुनका साथै अन्य प्रशासकीय प्रमुख एवम् दिग्गज व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि सांसद पुनले संगीतभन्दा टाढा कोही पनि नहुने भन्दै जसलाई जुन विषयमा दख्खलता हुन्छ त्यसैमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । अशोक वली ‘परिवर्तन’ संगीत क्षेत्रमै आफ्नो स्थान खोजिरहेको उर्जाशील प्रतिभा भएको भन्दै सांसद पुनले सार्वजनिक गीतको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै साहित्य र कलासँग आफू एकदमै नजिक रहेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले अशोक वली ‘परिवर्तन’को गीतले सिर्जनाकारहरुलाई मात्र हैन रोल्पालाई नै चिनाउने बताउनुभयो ।
विमोचित उक्त गीतको समीक्षा गर्दै साहित्यकार एवम् प्रतिष्ठानका सल्लाहकार डी.बी. टुहुरोले अशोक गायक मात्र नभएर चौतर्फी प्रतिभाका धनी भएको बताउनुभयो । गीतसंगीतका साथै साहित्य र पत्रकारितामा समेत क्रियाशील अशोकको गीतले सफलता पाउने कुरामा समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले रोल्पाका अध्यक्ष हरिप्रसाद घर्ती, नेपाल बार एशोसियसनका प्रतिनिधि एवम् अधिवक्ता जितविक्रम मल्ल, नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष मानसिंह विक लगायतले शुभकामना दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा अनुसन्धान प्रमुख मनोज ढकाल, जलजला बहुमुखी क्याम्पस रोल्पाका उपप्रमुख गोकर्ण पुनमगर लगायतको आतिथ्यता थियो ।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान रोल्पाका सचिव समेत रहनुभएका अशोक ओली ‘परिवर्तन’को शब्दरचना, लय र पुरुष आवाज रहेको छ भने चर्चित गायिका राधिका पुनले महिला आवाजमा साथ दिनुभएको छ । अक्सिजन मिडिया प्रालि मार्फत् बजारमा आएको यो गीत कृष्ण पुनको एरेन्जमा म्युजिक बैंक नेपालमा रेकर्डिङ भएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान रोल्पाका अध्यक्ष मिलन रोकामगरको अध्यक्षतामा भएकोे कार्यक्रमको सञ्चालन सहसचिव भीम ओलीले गर्नुभएको थियो । प्रथम उपाध्यक्ष दिपिन थापामगरको स्वागत मनतब्यबाट शुरु भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सिजलले गीत ‘प्ले’ गरेर लोकार्पण गर्नुभएको थियो । ओली रेडियो जलजलाका कार्यक्रम प्रस्तोता एवम् समाचार वाचक समेत हुनुहुन्छ । पाखापानी रोल्पा निवासी अशोकले यसअघि ‘जीवन जिउन पिरती लाइन्छ’ र ‘देश कस्तो बनाउने हाम्रै हातमा छ’ बजारमा ल्याइसक्नुभएको छ ।
रोल्पाटुडे बाट साभार